သာလွန်ဇောင်းထက်| January 17, 2013 | Hits:21,638
16 | | ဆန္ဒအလျောက် ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သည် ဆိုသည့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်း၊ သာသနာရေး ၀န်ကြီး သူရဦးမြင့်မောင် (ဓာတ်ပုံ – ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန)
22 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website job agency January 17, 2013 - 5:38 pm	NaY Zin Latt should also be axed.
Reply	[email protected] January 31, 2013 - 5:31 pm	အ မြဲ အား ပေး နေ မှာ ပါ